Mazotoa Foana Mampitandrina ny Olona! | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Faly be ny olona nijery an’ilay filma tsy misy feo mitondra ny lohateny hoe Ilay Dia Mamakivaky ny Tsena (anglisy). Nampiseho ny fiainan’ny mponin’i San Francisco, any Etazonia, taoriana kelin’ny 1900 izy io. Ahoana no nanaovana an’ilay filma? Nasiana kamerà teo amin’ny lohan’ny fiara iray, ary nentina namakivaky lalana be olona ilay fiara. Nahitana kalesy tarihin-tsoavaly sy fiara tranainy tao amin’ilay filma, ary mpiantsena sy mpivarotra gazety nanao ny asa aman-draharahany.
Mety hampalahelo koa anefa ny mieritreritra an’io filma io, izay angamba natao tamin’ny Aprily 1906. Nisy horohoron-tany sy afo mantsy tany ny 18 Aprily, taoriana kelin’ny nanaovana azy io. Olona an’arivony no maty ary saika potika tanteraka ilay toerana hita ao amin’ilay filma. Ny olona sasany hita tao aza angamba maty, andro vitsivitsy taorian’ny nakana filma azy. Hoy i Scott Miles, taranaky ny iray tamin’ireo nanao an’ilay filma: “Mampalahelo ahy ny mijery an’ireo olona ao amin’ilay filma! Lasa saina aho hoe: ‘Ireto olona ireto moa izany dia tsy mahalala ny loza hanjo azy!’ ”
Nisy horohoron-tany sy afo tsy nampoizina tamin’ny 1906, ka rava ny ankamaroan’ny toerana tao afovoan-tanànan’i San Francisco
Mampalahelo koa ny mpiara-belona amintsika ankehitriny. Manohy miaina toy ny isan’andro ihany izy ireo, nefa tsy fantany fa misy loza mananontanona, satria horinganina ity tontolo ity. Tsy toy ny horohoron-tany tsy ampoizina anefa ny didim-pitsaran’i Jehovah. Mbola manam-potoana kely isika hampitandremana ny olona fa ho avy izy io. Mety ho efa manokana fotoana hitoriana isan-trano ianao, isan-kerinandro. Afaka mampitandrina bebe kokoa ny olona ve anefa ianao?
VONONA HITORY FOANA I JESOSY
Tsy nisy fotoana mihitsy nieritreretan’i Jesosy hoe afaka tamin’ny adidiny hitory izy. Nitory tamin’izay rehetra nihaona taminy izy, na mpamory hetra hitany teny an-dalana izany, na vehivavy sendra azy teo am-pantsakana tamin’izy niala sasatra. (Lioka 19:1-5; Jaona 4:5-10, 21-24) Nafoiny hatramin’ny fotoana efa natokany hakana aina mba hampianarana ny olona. Nangoraka ny olona izy, ka tsy nianina tamin’izay kely indrindra vitany rehefa nanompo. (Mar. 6:30-34) Tsapany fa maika ny fitoriana. Ahoana àry no anahafan’ny mpitory azy?
MANARARAOTRA MITORY FOANA IZY IREO
Mipetraka ao amin’ny tranobe tsara ambina i Melika, ary mpianatra vahiny ny ankamaroan’ny olona ao. Tsy misoratra ao amin’ilay boky eo amin’ny fandraisana olona ny anaran’izy ireo, sady tsy ao amin’ny boky misy ny lisitry ny mpampiasa telefaonina. Faly erỳ i Melika manararaotra mitory amin’izy ireny rehefa mihaona aminy, ohatra hoe eny an-dalantsara. Hoy izy: “Nataoko faritaniko tao.” Mitondra taratasy mivalona sy gazety amin’ny fiteny samihafa izy, ary maro no mandray azy ireny. Asainy mijery ny tranonkalantsika jw.org koa izy ireo, ary maromaro no nanaiky hampianariny Baiboly.
Manararaotra mitory foana koa i Sonia. Miasa amin’ny toeram-pitsaboana izy, ary ataony tanjona ny hanazava tsara ny fahamarinana amin’ny mpiara-miasa aminy tsirairay. Dinihiny aloha izay mety hilain’izy ireo sy izay mahaliana azy. Hatoniny tsirairay izy ireo avy eo, amin’ny fiatoana amin’ny antoandro, ary iresahany momba ny Baiboly. Nisy mpiara-miasa roa nanaiky hampianariny Baiboly. Mieritreritra ny hankeo amin’ny toerana fiandrasana olona koa i Sonia mandritra ny fiatoana amin’ny antoandro, mba hitory amin’ireo miandry dokotera.
Nilaza ny olona iray tafavoaka velona tamin’ilay horohoron-tany tamin’ny 1906, fa iny no “loza nahatsiravina indrindra namely faritra na tanàna iray.” Tsy misy dikany anefa ny loza rehetra raha oharina amin’ilay andro famaliana ho avy, izay handringanana an’ireo “tsy mahalala an’Andriamanitra.” (2 Tes. 1:8) Tena tian’i Jehovah hanova ny fisainany sy ny toe-pony ny olona, ka hanaiky ny fampitandremana ampitain’ny Vavolombelony.—2 Pet. 3:9; Apok. 14:6, 7.
Manararaotra mitory foana ve ianao rehefa manao ny asa aman-draharahanao?
Manana tombontsoa ianao hanampy ny olona hahita fa efa akaiky ny farany, ka handrisika azy ireo hitady an’i Jehovah fa tsy ho variana hanao izay tiany fotsiny. (Zef. 2:2, 3) Nahoana àry raha manararaotra mitory amin’ny mpiara-miasa sy ny mpiray tanàna, na amin’izay mihaona aminao rehefa manao ny asa aman-draharahanao ianao? Miezaha hampitandrina bebe kokoa ny olona!
Hizara Hizara Mazotoa Foana Mampitandrina ny Olona!